Ifulethi i-Marušić Brgulje A1 - I-Airbnb
Ifulethi i-Marušić Brgulje A1
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Mile
Siqasha amafulethi amabili atholakala e-Island Molat eduze kwaseZadar edolobhaneni elincane okuthiwa i-Brgulje. Konke okudingayo ukuze ube neholide elihle kulesi siqhingi esinomlingo nesinokuthula.
Igumbi lokulala elifakwe ngokugcwele, igumbi lokugezela, ikhishi kanye negumbi lokuhlala, elinazo zonke izinto ezidingekayo, ithala elikhulu futhi mahhala ukusebenzisa i-grill. Bheka izithombe nezincazelo.
I-Molat ifinyeleleka nsuku zonke kusukela e-Zadar kubagibeli abahamba ngoseyili osheshayo wehora elilodwa noma ngezimoto futhi nsuku zonke ngesikebhe esingamahora angu-3 enjabulo emsulwa nokubukwa okumangalisayo. Singasiza ngokwenza imiyalelo yokubhuka nemininingwane noma sihlangane nawe e-Zadar futhi siphelezele ukuya e-Molat.
Kukhona izitolo lapho ungathola khona izinto zansuku zonke, futhi kukhona indawo yokudlela neCaffe zombili ezinethala elihle.
Esiqhingini, kunemizi emithathu yonke exhumene nomgwaqo. Azikho ezokuthutha zomphakathi kodwa ungaqasha amabhayisikili uma ungezi nemoto yakho.
Lena indawo enhle ngempela yokuhlala futhi ube neholide elinokuthula kodwa akuyona eyabavakashi abafuna impilo yasebusuku esebenzayo. Asitholi izivakashi eziningi kodwa lezo esizenzayo, zibuya njalo :)
Sesha i-inthanethi ye-Molat kanye/noma i-Brgulje ukuze uthole izithombe neminye imininingwane yomlando.
Imvelo engakathintwa futhi engaminyene. Izigidigidi zezinkanyezi esibhakabhakeni ebusuku. Indawo yokujabulela ulwandle oluhlanzekile nelanga elishisayo.
old guy, so I have probably been there done that :)
Ngizotholakala ngesikhathi sokuhlala kwakho nganoma yikuphi ukwesekwa okudingekayo.